Pregnancy & Birth Archives – Kalay
ဆီးချိုစမားတွေ simulacra mum တိုက်လို့ရလား ခင်ဗျ
Maÿ Ingynn Thwê
1 comments 186
မင်္ဂလာပါ ဆရာ ကိုယ်ဝန် ၃၅ ပတ်ထဲမှာပါ ကလေးက ထိုင်နေရင်ဖြစ်ဖြစ် မတ်တပ်ဖြစ်ဖြစ် ချက်ပေါ် လုံးပြီးတက်တက်လာတတ်ပါတယ် အဲလိုဖြစ်ရင်...
ကိုယ္ဝန္၁၀ ပတ္ပါ. ရင္ေတြပူၿပီး တံေတြးေတြတခ်ိန္လံုးထြက္ေနပါတယ္ရွင္. ညပိုင္းေတြပိုဆိုးၿပီး အစာစားလို႔မရ...
မင်္ဂလာပါ ဒုတိယ ကိုယ်ဝန် ဆယ်ပတ် ထဲမှာပါ လက်ဖက် စား လို့ ရလား သိချင်လို့ပါ ကျေးဇူးပါ
Khin Nyein Nyein Ko
ကိုယ်ဝန်၁လပါ သွေးတစ်စက်နှစ်စက်ဆင်းနေပါတယ် ဆီးခုံက တင်းနေပါတယ် အပေါ့သွားလို့ ရေဖြန်းလိုက်ရင် တစ်ရူးစလေးလိုမိုး ကြကြလာပါတယ် ဆေးခန်းပြထားပါတယ် ခိုင်ဆေးပေးပါတယ် စိုးရိမ်ရလားရှင့် စိတ်အရမ်းပူနေပါတယ် သားဦးပါ
ကိုယ္၀န္ကာလ ေလးလရှိေနျပီး။ ေန့တိုင္းလိုလို ေန့လယ္ေရာက္တာနဲ့ ဗိုက္ထဲမှာ ေပြလာတယ္။ အစာစားရင္ အန့္တယ္။ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ သိခ်င္တယ္
Daw April Phoo
ဗိုက်နားမှာ သီချင်းအကျယ်ကြီးဖွင့်မိရင် အထဲက ကလေးနားအူနိုင်လား သိချင်ပါတယ်ရှင်
ကိုယ်ဝန်က အပတ် ၃၀ ပါ ဗိုက်ထဲက က​လေးက တစ်​ရက်ကို ဘယ်နှကြိမ်​လောက်လှုပ်ရှားပါသလဲ
ဆရာေရ..အခုကိုယ္ဝန္ ၂လေက်ာ္ပါေတာ့မယ္ ..တစ္ခါတစ္ေလ ဗိုက္ထဲမွာကိုက္ခဲတာမ်ိဳးခံစားရပါတယ္...
ကိုယ်ဝန်​ဆောင်သက်တမ်း(၂၆)ပတ်မှာ အန်ထရာ​ဆောင်းရိုက်ရင် ​က​လေးက ဘာ​လေးလဲဆိုတာ တိတိကျကျ သိရလားရှင့်
ဆရာရှင့် ကျွန်မအခုကိုယ်ဝန်၁၆ ပတ်ပါ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်မပျော်လို့ပါ ခဏခဏနိုးပါတယ် တရေးနိုးပီးပြန်အိပ်မပျော်နိုင်ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်...
ရေမွှာက ဘယ်လိုတွေကြောင့် ခမ်းရတာလဲရှင့်
ဆရာရှင့် ကိုယ်ဝန်(၇)လရှိပါပြီ ဝမ်းအရောင်‌ေပြာင်းတာစိုးရိမ်ရလားရှင့်
Nang Nwam Phaung
ကိုယ်ဝန် ၃၆ ပတ် , လင်းနို့ ကိုက်ခံရ
ကိုယ်ဝန် ၃၆ ပတ်နဲ့ လင်းနို့ကိုက်ခံရလို့ပါ ခွေးရူးကာကွယ်ဆေးလည်းထိုးလို့မရဘူးပြောလို့ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲစင့်